Extrapyramidal Side Effects (Extrapyramidal Symptoms) (စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ) - Page 23 of 58 - Hello Sayarwon
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။2ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ဆိုတာ ဘာလဲ။
စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တနည်းအားဖြင့် Extrapyramidal Symptoms (EPS) ဆိုတာ Antipsychotic အုပ်စုဝင် ဆေးဝါးတွေနဲ့ အခြားဆေးအမျိုးအစား အနည်းငယ်ကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Antipsychotic အုပ်စုဝင် ဆေးဝါးတွေကို စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ၊ ပြင်းထန်စိတ်ကျရောဂါ စတဲ့ စိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကုသရာမှာ အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။
၎င်းဆေးဝါးတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Extrapyramidal ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို တူရာတူရာစုပြီး အုပ်စုခွဲခြားထားပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုပုံမမှန်တဲ့ ပြဿနာတွေကို dyskinesias၊ ကြွက်သားကျုံ့မှုပုံမမှန်တဲ့ ပြဿနာတွေကို dystonias လို့ခေါ်ပြီး ကြွက်သားအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားတဲ့ (အရပ်အခေါ် အကြောဆွဲတဲ့) ပြဿနာတွေကိုတော့ tardive symptoms လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးတွေကို နှစ်နဲ့ချီအောင် သောက်သုံးရတဲ့ လူနာတွေမှာ tardive symptoms တွေ တွေ့ရတတ်ပြီး ဆေးရပ်လိုက်တဲ့နောက်မှာတောင် မပျောက်နိုင်ဘဲ တစ်သက်လုံးစွဲကျန်ခဲ့ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။
စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
EPS ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး လက္ခဏာတွေကတော့
ဂနာမငြိမ် ယောက်ယက်ခတ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားထိတ်လန့်ခြင်း၊ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရှပ်တိုက်သွားခြင်း၊ ခြေဆောင့်ခြင်း
ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ ကိုယ်ထည်နှင့် ခြေလက်ကြွက်သားများ သူ့အလိုလိုကျုံ့ပြီး လျှာတောင့်တင်းခြင်း၊ လည်လိမ်ခြင်း၊ ကျောကိုင်းခြင်း
ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်တောင့်တင်းခြင်း၊ လက်မလွှဲဘဲ လမ်းလျှောက်ခြင်း
လျှာ၊ မေး၊ နှုတ်ခမ်းနှင့် မျက်နှာကြွက်သားများ အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားခြင်း ဥပမာ နှုတ်ခမ်းစူခြင်း၊ ခဏခဏ မျက်တောင်ခတ်ခြင်း
ခြေချောင်းလက်ချောင်းများ အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ခေါင်းငြိမ့်ခြင်း၊ ကော့ထိုးခြင်း
စည်းချက်မမှန်ဘဲ အသက်မြန်မြန်ရှူခြင်း၊ မေးထိုးရှူခြင်း၊ သက်ပြင်းချခြင်း
အသံကောင်းကောင်းမထွက်ခြင်း၊ သွားရည်ကျခြင်း၊ မျက်နှာအမူအရာမပြခြင်း
ဘာတွေက စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
များသောအားဖြင့် Dopamine လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့ သမားရိုးကျ စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါး (typical antipsychotics) တွေကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့် သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါး (atypical antipsychotics) တွေကြောင့်လည်း ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို စိတ်ကျဝေဒနာသက်သာဆေး (antidepressants) တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးဝါးတွေကို ပုံမှန်သောက်သုံးနေရတဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါနဲ့ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာရှင်တွေမှာ Extrapyramidal ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေ အများဆုံးတွေ့မြင်နိုင်ပေမယ့် ဆေးလုံးဝမသောက်ဖူးတဲ့ လူနာတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်မှာ စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းရှိမရှိ အဖြေရှာအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်အများဆုံး လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ဖို့ စံသတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာအပေါ် မူတည်ပြီး ကုသမှုတွေလည်း ကွဲပြားနိုင်တဲ့အတွက် လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက္ခဏာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးပမာဏကို လျှော့ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းတဲ့ အခြားဆေးတစ်မျိုး ပြောင်းပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ extrapyramidal ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို တုန့်ပြန်သက်ရောက်နိုင်တဲ့ benzodiazepines နဲ့ anticholinergics အုပ်စုဝင်ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်လည်း သက်သာနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ antipsychotics တွေက dopamine လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးပြီး anticholinergics တွေက dopamine ထွက်ရှိမှုကို မြင့်တက်စေတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမာရိုးကျ Antipsychotic များ
ပထမမျိုးဆက် စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးတွေဖြစ်တဲ့ သမားရိုးကျ antipsychotic (Typical antipsychotic) တွေက extrapyramidal ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါး စီမံကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရ Typical antipsychotic တွေကတော့
သမားရိုးကျမဟုတ်သည့် Antipsychotic များ
အကယ်၍ သမားရိုးကျ antipsychotic တစ်ခုခုကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်က အောက်ဖော်ပြပါ ဒုတိယမျိုးဆက် antipsychotic (Atypical antipsychotic) တစ်ခုခု ပြောင်းပေးနိုင်ချေရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါး စီမံကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရ Atypical antipsychotic တွေကတော့
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက စိတ်ရောဂါကုဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Extrapyramidal Symptoms) ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
What Are Extrapyramidal Side Effects? https://www.verywellmind.com/extrapyramidal-side-effects-380021. Accessed May 21, 2018.
Extrapyramidal Symptoms. http://www.psychvisit.com/conditions/schizophrenia/2-symptoms-definition-schizophrenia/2-04-extrapyramidal-symptoms-EPSE.html. Accessed May 21, 2018.
Extrapyramidal Symptoms. https://www.drugs.com/cg/extrapyramidal-symptoms.html. Accessed May 21, 2018.
Recognition of Movement Disorders: Extrapyramidal Side Effects and Tardive Dyskinesia. https://www.medicalnewstoday.com/releases/13702.php. Accessed May 21, 2018.